Mbido DEAO na 16th Automechanika Shanghai
Companylọ ọrụ anyị ga - ejide 16 nke Automechanika Shanghai na National Exhibition and Convention Center (Shanghai) site na Disemba 02 ruo 05, 2020
Daalụ nke ukwuu maka nkwado ị gara n'ihu na ụlọ ọrụ anyị,
N'oge a, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. ga-achọ ịgbakwunye anyị oku sitere n'obi ma lelee ọbịbịa gị.
Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ike ịga ebe ahụ n'ihi mgbochi njem nwere ike isonye na mmemme ụlọ ọrụ ụgbọ ala ụwa a site na ikpo okwu AMS Live n'ịntanetị, nke ga-emeghe site na November 30 ruo Disemba 6. Ihe ngosi AMS Live ga-enye ihe dị mfe maka ọtụtụ ndị na-ege ntị na mba ofesi ndị na-enweghị ike ịga ebe ahụ.
A na-atụ anya na 16 Automechanika Shanghai ga-adọta ihe ngosi 3,900 site na mpaghara ụlọ ọrụ ụgbọ ala dum, yana mpaghara ngosi ngosi nke mita 280,000. Ngosipụta a ga-elekwasị anya na isiokwu nke "Iwuli Ọdịdị Akụrụngwa Ọdịnihu", bulie ma melite ngalaba asaa dị mkpa na mpaghara atọ pụrụ iche, ma kwalite njikọta nke ihe ọrụ mmepụta ihe na mmepe ụzọ gafere oke teknụzụ ọhụụ.
Ka ọ dị ugbu a, Automechanika Shanghai bụ nnukwu ihe ngosipụta ụgbọ ala kachasị ukwuu na nke kachasị ukwuu n'etiti ọtụtụ ngosipụta ụgbọ ala Asia. Ọ bụ ihe ngosi na-atụ anya n'ihu, na-eduga ụlọ ọrụ ụgbọ ala n'ụlọ na mba ọzọ maka ọdịnihu nke mmepe teknụzụ dị elu. Ọ na-ekpuchi ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ nke ụgbọ ala dịgasị iche iche, ma nwee ọtụtụ ozi ahịa.
Dị ka ihe ngosi mba ụwa, Automechanika Shanghai na-enye anyị ụzọ bara ezigbo uru iji chọpụta ahịa ndị na-apụta ma mee ka ndị ahịa nwee mmekọrịta chiri anya.
Oge a ka anyị wetara isi ahịa ngwaahịa TPE ụgbọ ala na ngwa ngwa ndị ọzọ, na-enwe olileanya ịgbasa ahịa ahịa, ma n'otu oge ahụ kpọtụrụ ndị ahịa anyị na-achọghị ahịa. Nke a nwere ezigbo ndu ọrụ maka ụlọ ọrụ anyị na-esote mmepe, iji ghọta atụmanya na ohere ndị ahịa.
Ugbu a, ahịa akpaaka ewetawo mgbanwe n'otu oge na narị afọ. Site na isonye na Automechanika Shanghai, anyị nwere ike ịmeri ihe ịma aka ndị ahụ ma ghọta usoro mmepe n'ọdịnihu nke ahịa ahụ.